Soomaaliya iyo Morocco oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya “Sawirro” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya iyo Morocco oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya “Sawirro”
Soomaaliya iyo Morocco oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya “Sawirro”
Muqdisho (SONNA), October 25, 2017 – Wasiir kuxiggeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya H.E. Mr. Mukhtar Mahad Daud oo howlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu halkaasi kula kulmay wafdi ka socday Boqortooyada Morocco oo uu hoggaaminayay Agaasimaha guud ee Iskaashiga Caalamiga ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalkaasi Ambassador Mohamed Methqal.
Dowladda Boqortooyada Morocco, ayaa Soomaaliya uga tacsiyeysay falkii argagaxisanimo ee dhiigga badan ku daatay ee October 14, 2017 ka dhacay Isgoyska 14 October “Zope” ee Muqdisho, kaasi oo gallaaftay nolosha 358 ruux iyo dhaawaca boqolaal rayid ah oo u badnaa xoogsato, dad socoto ah iyo arday.
Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka qotada dheer ee Soomaaliya iyo Morocco u dhexeeya, istiraatiijiyad wax wadaagid dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo bulshada, waxayna Soomaaliya iyo Morocco ay isla garteen in booqashooyin heerkoodu sarreeyo la is dhaafsado.
Previous articleDowladda Imaaraadka oo dhaawacyo u qaaday dalka Kenya “Sawirro”
Next articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si diiran loogu soo dhaweeyay Turkiga “SAWIRRO”